हावाहुरी र चट्याङको क्षति न्यूनीकरणमा पूर्वसूचनाको अभाव «
हावाहुरी र चट्याङको क्षति न्यूनीकरणमा पूर्वसूचनाको अभाव
०७७ चैत १७ गते बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीले धनजनको ठूलो क्षति भयो । बारामा कम्तीमा २९ जनाको र पर्सामा एक जनाको मृत्यु भयो । कैंयौंको बासस्थान रहेन । गृह मन्त्रालयको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार छ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते भए । चैत १७ गते साझ साढे सात बजेदेखि सुरु भएको हावाहुरी झन्डै आधा घण्टासम्म चलेको थियो ।
त्यो कहालीलाग्दो दिनले धेरैको सुन्दर जीवन नै उजाडियो । हावाहुरीका कारण १८ सय ९५ घरमा क्षति पुगेको थियो । बर्सेनी हावाहुरीका कारण मानिसको मृत्यु हुन्छ । कृषि बालीको क्षति हुँदै आएको छ । बास उठाएको छ ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १ महिनामा चट्याङबाट १ जनाको मृत्यु भएको छ । हावाहुरीबाट १ जनाको मृत्यु भएको छ । आगलागीबाट १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । २८ करोड क्षति भएको छ भने १५७ संरचनामा क्षति पुगेको छ । आगलागीका ३३९ घटना भएका छन् ।
मौसविद्का अनुसार प्रिमनसुनको समयमा यस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरु बढी हुने गरेका छन् । मार्च १ देखि जुन १० सम्मको अवधिलाई प्रिमनसुनको अवधि मानिन्छ । तर प्रिमनसुनको समय सुरु हुनु अगावै पनि घटना भएको देखिन्छ । मौसमविद्का अनुसार हावाहुरी तथा चट्याङ र आगलागीका घटना अझै बढ्ने छ ।
विपत व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले हावाहुरी, चट्याङ तथा आगलागी जस्ता घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि ठाउँठाउँमा डिसप्ले बोर्ड आवश्यक रहेकाले यसमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । “हरेक स्थानीय तहमा विपत व्यवस्थापन ऐन छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यक छ,” उनले भने । उनका अनुसार प्रिमनसुनमा बढी हावाहुरी लाग्ने, चट्याङ पर्ने, आगलागी हुने भएकाले सावधानी अपनाउनु जरुरी पर्छ ।
उनले भने, “पूर्वसूचना छ तर सरकारी संयन्त्रमा हावाको गति थाहा दिने गरी पूर्वसूचना दिइँदैन । थाइल्याण्डमा अन्तरसरकारी संस्था (राइन्स) छ, त्यसको नेपाल पनि सदस्य छ । सूचना राइन्सबाट लिन सकिन्छ तर सर्वसाधारणमा प्रभावकारी सूचनाको प्रवाह हुँदैन ।” जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी उप–महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले बाढीको पूर्वानुमान हावा हुरी, चट्याङको नहुने बताइन् ।
चट्याङको क्षति न्यूनीकरण